Yan Aung: တစ္ဆေခြောက်တဲ့ည… (၀ါ) သရဲခြောက်ခံရသည့် အတွေ့အကြုံများ…
တစ္ဆေခြောက်တဲ့ည… (၀ါ) သရဲခြောက်ခံရသည့် အတွေ့အကြုံများ…
အားလုံးပဲ အမှတ်တရရေးကြမယ်ဗျာ. ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ မပြောပါဘူး. ဒီပို့စ်ကို ခင်ဗျားဖတ်နေပြီဆိုရင် ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် Tag လိုက်ပြီလို့သာ အောက်မေ့လိုက်တော့ဗျာ.
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ ဘလော့ဂ်လောကကြီးကို စိုပြည်သွားအောင် ဖန်တီးလိုက်ကြတာပေါ့.
October 31 က Halloween Night လေ…
အမှတ်တရအနေနဲ့ ရေးတဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်တော့်လင့်ခ်မှာ ချိတ်ပေးမယ်… ချိတ်ပြီးသားသူက ရေးတယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့ အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင် သရဲတစ်ကောင်ပို့ပေးမယ်…
သရဲ တစ္ဆေ အခြောက် တစ်ခါမှ မခံရဖူးဘူး ... :)
ကိုရန်အောင် ဒတ်ပုံ ဟာသဘဲဗျ။ ဦးခေါင်း ပုခုံးလက်ပုံပါတဲ့ ပလပ်စတစ် အခွံကို စောင်အုပ်ပြီး စက်ဘီးမှာ ကပ်ချည်ထားတာ ဟွတ်ဟွတ်ဟွတ် ကျောက်ဖြာကြီး
သရဲပို့ပေးမယ်ဆိုရင် ရေးတော့ဘူး။ ကျောင်းဆရာကြီး... အဲ ကြောက်စရာကြီး
အဓိပတိကြီး ကိုရန်အောင်က တူယဲချောက်ပြသတဲ့
အဟီး ကျောက်ဖျာကျည်းပါလား ဟရို့ ။ ခက်တာက စောင်နောက်မှာ ပုန်းနေတဲ့ သူရဲ့ ခြေထောက်လေးပေါ်နေတာ တူယဲ က မတိရှာဘူး ဟတ်ဟတ်။ ပြီးတော့ ပလပ်စတစ် ခေါင်းပုံ က တခြမ်းဘဲရှိတော့ စောင်အုပ်ထားတဲ့ ထိပ်မှာ စက်ဝိုင်းခြမ်းလေးလို ၀ိုင်းပြီးပေါ်နေတယ်.. အဓိပတိကြီး ခင်များ.. တူယဲကို ပြောပြလိုက်ပါ။ နောက်တပုံ ထပ်ရိုက်ပါအုန်းလို့ 
သရဲကို ငယ်ငယ်ထဲက ကြောက်တာဂျ။
ဟတ်ဟတ် သရဲက လေထဲ မပျံဝဲနိုင်တဲ့ အစွမ်းမရှိတဲ့ ဒုတ်ခိတ သရဲဘဲ ဒါ့ကြောင့် စက်ဘီးသိုဖို့ ကြံတာ ပြီးတော့ သရဲထုံးစံစည်းကမ်းကို ဖျက်ပြီး နေလည်ခင်း နေပူပူ အလင်းရောင် ထဲလာစောင်ခြုံပြနေတယ် အတ်အတ်အတ်.... မဟုတ်မှလွဲရော ညဘက် ထွက်တဲ့ သရဲကို ကြောက်ရလို့ နေ့ လည်ဘက် ထွက်ခိုးတာဖျစ်ရမယ် ခည။ ဖြစ်ချင်တော့ သရဲရဲ့ အရိပ်ကလည်း မဲမဲကြီးပါလားဗျို့ ....၈တ်၈တ်၈တ်
အဓိပတိကြီးခင်ဗျား သရဲဆိုတာ ညဘက်ထွက်လေ့ရှိပါတယ် လေထဲမျှောနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိလို့ကားမလို စက်ဘီးမလိုပါ သရဲမှာ အရိပ်လုံးဝ မထွက်ပါသဖြင့် နောက်ထပ်တပုံ ရိုက်ပြီး တင်ပေးစေလို ပါကြောင်း ဂုဂုဂု....
လာစတာ ... သရဲခြောက်ခံလိုက်ရတယ်..။အခြောက်မခံရဘူးတော့ ကြံဖန်ပြီး အခြောက်ခံရချင်ယောင်ဆောင်ပြီးရေးလို့ရောရလား...။
I want to read more & more about ghost or whatever , but dont send me the ghost , thanks
kinjeri ro said...